မှတစ်ဦးကထက်ဝက်ရက်ကြာခရီးစဉ် မင်းကွန်း သငျသညျမြန်မာနိုင်ငံ၌မန္တလေးသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလုပျဆောငျရမညျတစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည် (မြန်မာနိုင်ငံ).
ရုံဧရာဝတီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီး (ဧရာဝတီမြစ်) မန္တလေးကနေမင်းကွန်း၏ငယ်မြို့နယ်အများအပြားအံ့မခန်းမြင်ကွင်းများရှိပါတယ်. အကျော်ကြားဆုံးနှစ်ခုဟာမင်းကွန်း Pahtodawgyi များမှာ, အုတ်လောကီသားတို့သည်အအကြီးဆုံးပုံ၏ခေါင်းစဉ်ဟုဆိုကာ, အထိကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာခေါင်းလောင်းအဖြစ်စံချိန်ကျင်းပပေးသောနှင့်မင်းကွန်းဘဲလ် 2000.
မန္တလေးကနေမင်းကွန်းဖို့ဧရာဝတီမြစ်ကိုတက်မယ့်သက်သာစေသောဆေးကိုပေးကူးတို့စီးဖြစ်ပါတယ်. ကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်လက်မှတ်များအတွက် 5,000K ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကူးတို့ 9.00am မှာမန္တလေးအရွက်များနှင့် 10.00am န်းကျင်မင်းကွန်းမှရရှိသွားတဲ့. သင်မှာ .... ရှိသည် 2.5 –3ပြန်ကူးတို့လှည့်ပတ်အရွက်မတိုင်မီမင်းကွန်းတစ်ဝိုက်ကိုကြည့်ဖို့နာရီ 12.30 – 1.00မန္တလေးတွင်ညနေများနှင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိ 40 မိနစ်အကြာ.
လက်မှတ်တွေကိုသင်သွားချင်သောနေ့၌ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယူခဲ့ (သို့မဟုတ်သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရေအတွက်အားသတိရ) အဆိုပါလက်မှတ်ရုံးမှာခရီးသည်စံချိန်တင်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်. ကူးတို့နှင့်လက်မှတ်ရုံး 26 လမ်း၏အဆုံးမှာသန်မြန် Gyan ဆိပ်ကမ်းမှာအတူတူဖြစ်ကြောင်း. ဒါဟာအနည်းဆုံးလက်မှတ်ရုံးဖို့အကြံပြုသည် 30 မထွက်ခွာမှီမိနစ်သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်အညီရဖို့ရှိသည်နှင့်သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ရဖို့ရှေ့တော်၌ထိုလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်လက်မှတ်အရာရှိရဲ့အစိတျအပိုငျးအပေါ်ရေးသားခြင်းအများကြီးကပါဝင်ပတ်သက်အဖြစ်.
မှာသင့်ရဲ့ကူးတို့ထံမှ disenbarking ပြီးနောက် မင်းကွန်း သင်ဆိုဒ်များန်းကျင်ကိုသင်မောင်းထုတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေဒေသခံတက္ကစီ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်စီးနင်းညှိနှိုင်းရန်ဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်ခံစားနိုငျ, သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်. သင်မင်းကွန်းစူးစမ်းလေ့လာနိုင်မီငယ်လက်မှတ်ကို kiosk မှာ Archelogical လက်မှတ် 5,000K ဝယ်ယူရန်ရှိသည်. သငျသညျမန္တလေးတွင်ဝယ်ဖို့အဆိုပါ 10,000k Archelogical ဇုန်လက်မှတ်မင်းကွန်းကိုဖုံးလွှမ်းမထားဘူး.
ကမ်းခြေအနီးရှိလက်မှတ်ရုံးအတိတ်လမ်းပေါ်မှာကြည့်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာပုညဒေါ်စေတီတော်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာချောမင်းကွန်း Pahtodawgyi တူကြလိမ့်မယ်အရာ၏သေးငယ်တဲ့ပြခဲ့သည်ဆို၏ပုံတူဖြစ်ပါသည်.
အဲဒီမှာဦးခေါင်းကနေမြောက်ပိုင်းလမ်းဖွင့်, သေးငယ်တဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မြင့်တက်, ဆင်းဧရာဝတီမြစ်မှပြန်အဓိကလမ်းကနေသွားရသော Sat Taw Yar စေတီတော်ကြောင်းညာဘက်အဖြူရောင်အဆောက်အဦမှတက်.
အကြောင်း 100 နောက်ထပ်အဲဒီမှာကနေလမ်းပေါ်တက်သင့်ရဲ့ညာဘက်အပေါ်သူတို့အနားမှာသေးငယ်တဲ့အစားအစာနှင့် souvenier စျေးကွက်နှင့်အတူဧရာသေ့များမှာ.
ဖြောင့်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးခြင်္သေ့ကနေကြီးမားတဲ့မင်းကွန်း Pahtodawgyi ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမင်းကွန်း Pahtodawgyi ၏အဆောက်အဦများတွင်စတင်ခဲ့သည် 1790 နှင့်ရပ်တန့် 1819 အဲဒါကိုတည်ဆောက်သူဘုရင်၏အသေခံခြင်းနှင့်အတူ. ထိုကာလကအရပ်ရှည်ရှည် 50 ခဲ့သည်. ဒါဟာနေဆဲန်းကျင် 150m မှာကမ်ဘာပျေါတှငျအမြင့်ဆုံးဗိမာနျတျောအဖြစ်စံချိန်ကိုင်ထားမယ်လို့ကပြီးစီးခဲ့ (500 ခြေဘဝါး).
ရုံမြောက်ဘက်ကနေအဲဒီမှာအစားအသောက်နှင့်လက်မှုပညာဆိုင်များဖြစ်ကြပြီးသင်တို့အပေါ်မှာ left မင်းကွန်းဆရာတော်စေတီတော်ဖြစ်ပါသည်, သေးငယ်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အောက်မေ့ဖွယ်စေတီတော်.
ထိုအရပ်မှမြောက်သည်သင်၏လက်ဝဲဘက်အပေါ်အကြောင်းကို 100 လမ်းပေါ်မှာတက်မင်းကွန်းဘဲလ်ဖို့ဆက်လက်. အဆိုပါမင်းကွန်းဘဲလ်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် 1808 နှင့်သည်အထိ 2000 ကကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာခေါင်းလောင်းခဲ့သည်.
အဆိုပါမင်းကွန်းဘဲလ်ကနေလမ်းပေါ်တက်အကြောင်းကို 150m နောက်ထပ်ဆက်ပြီးနှင့်တောင်ပိုင်းဝင်ပေါက်ရိုက်ထည့်ပါနှင့် Hsinbyume စေတီတော်သောလှပသောအဖြူရောင်ဧရာဗိမာနျတျောကိုစူးစမ်းဖို့အခြမ်းလမ်းသို့လှည့် (ထို့အပြင် Myatheindan စေတီတော်ဟုခေါ်တွင်). တနည်းအစားဖြောင့်ရှေ့လမ်းဖွင့်မယ့်နောက်ထပ် 50 ကိုဆက်လက်နှင့်အဓိကအရှေ့ဝင်ပေါက်ဝင် left လှည့်များ၏.
အကြွေး – www.svietnamtravel.com/myanmar/destinations